Ahoana ny fomba hampiononana olona malahelo na mitomany (+ ahoana no tsy tokony hatao) - Blog
Ahoana ny fomba hampiononana olona malahelo na mitomany (+ ahoana no tsy tokony hatao)
Efa mba te hampionona olona malahelo ve ianao, ary mahita ny tenanao tafintohina amin'ny teny?
Fihetseham-po mahatsiravina ny te-hanatratra olona hampionona olona nefa tsy mahalala izay teny mety sy ny fomba fifampiresahana.
Rehefa dinihina tokoa, tsy te-hanao ratsy ny toe-javatra ianao amin'ny filazanao zavatra tsy mety. Marina?
Ny vaovao tsara dia izany tena tsy misy zavatra diso be loatra azonao lazaina rehefa manandrana mampionona olona malahelo.
Amin'ny ankapobeny ny olona dia afaka mamantatra raha misy olona manandrana manao soa na manohana azy ireo na inona na inona teny ampiasainy hifandraisana.
Azo inoana fa mety efa niaina hadalana tamin'ny faniriany hanampy olona sendra zava-tsarotra izy ireo.
Ny zavatra lazainao dia tsy dia zava-dehibe noho ny fanatrehana ilay olona fotsiny.
Ny fanatrehanao sy ny fahavononanao hiaraka amin'izy ireo amin'ny alahelony dia mampita zavatra betsaka kokoa noho ny teny tena mahay.
Saingy tsy midika izany fa mila mandeha an'io toe-javatra io ianao nefa tsy misy teny ao an-tsaina.
Misy andian-teny tsotra azonao ampiasaina rehefa manandrana mampionona olona iray sy manome azy ireo fihatsaram-panahy.
'Hitako fa sosotra ianao. Te hiresaka momba izany ve ianao? ”
Ny ampahany sarotra indrindra amin'ny olona maro dia ny manomboka ny resaka. Fomba tsotra io.
Azonao atao ny manomboka ny resaka amin'ny fanontanianao tsotra raha te hiresaka momba ny olany ilay olona.
Mety tsy izy ireo - ary tsy maninona! Mety mila fotoana izy ireo handaminana ny olany.
Mety tsy eo amin'ny toerana ara-tsaina mety hisokatra sy mora tohina amin'izay mety hiteraka alahelo koa izy ireo.
Ity koa dia fomba tsara hanokafana resadresaka raha te hanantona olon-tsy fantatra ianao na olona tsy fantatrao tsara toa misedra fahantrana.
Ampidiro fampidirana fotsiny:
'Salama e. Jack aho. Hitako fa sosotra ianao. Te hiresaka momba izany ve ianao? ”
Aza manizingizina fa hisokatra ilay olona na hiteny raha tsy tiany. Ampahafantaro azy ireo fotsiny fa eo ianao ary eo ho azy ireo raha miova hevitra izy ireo.
'Ho anao aho raha mila ahy ianao.'
Mety hanirery sy hitoka-monina ny alahelo. Mora ny mahatsapa fa ny olon-kafa dia tsy afaka mifandray amin'ny fanaintainana mety hiainantsika, na dia fantatsika aza fa ny olona iray hafa dia niaina fanaintainana mitovy amin'izany.
Mety hahatsapa ianao fa asehonao fa vonona ianao ary vonona ny ho eo ho an'ny olon-tianao, saingy miteny mafy azy dia fanamafisana matanjaka fa takatrao fa mandalo fotoan-tsarotra izy ireo, ary te ho eo ho azy ireo ianao mandritra ny fanaintainany.
Ary avy eo araho izany fanambarana izany amin'ny alàlan'ny tena maha-eo anao.
Ny olona mazàna manadino fa ny fanaintainana sy ny alahelo dia tsy mamarana ny fotoana ajanon'ny olona hitomany.
Ny fahatongavana any ho an'ny olon-tianao dia mety mitaky ny fizahana azy ireo andro vitsy any aoriana mba hahazoana antoka fa mbola mahazo ny karazana fanampiana ilain'izy ireo hizaka ny alahelony.
'Mahatsiaro ahoana ianao?'
Ity dia fanontaniana lehibe iray satria mety tsy ny alahelo sy fihetseham-po ratsy hafa ihany no misy fihetseham-po.
Rehefa manontany ny zavatra tsapan'ilay olona ianao dia avelanao hamoaka ny fihetseham-pony hafa azonao atao ny manamarina sy manohana.
Ho ohatra iray - ndao lazaina fa ny renin'ny namantsika dia narary efa maty.
Mpanampy izy ireo nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, nitondra azy ireo tany amin'ny fanendrena dokotera, nijery azy ireo nandalo ny lafiny ratsy indrindra amin'ny aretina mitaiza izay mety hahafaty azy ireo amin'ny farany.
Maty ilay renim-pianakaviana ary hitanao fa manohana an'io namana io ianao.
Mety halahelo ilay namany, nefa mety hanana fahatsapana hafa momba ilay toe-javatra koa izy ireo.
Mety tsy ho malahelo be akory izy ireo, satria efa nanao izany nampalahelo ny fatiantoka ny renin'izy ireo, fony izy mbola velona.
Ny olona iray ao anatin'izany toe-javatra izany dia mety hahatsiaro ho maivamaivana satria tsy mijaly intsony ny reniny noho ny aretiny.
Izany fanamaivanana izany dia fahatsapana mitombina ihany koa, saingy ny iray izay azo odian-tsy jerena raha ny hafa rehetra kosa miatrika ny fahavoazana eo noho eo.
Mety hahatsiaro tena ho meloka izy ireo noho ny fahatsapana fanamaivanana tamin'ny fahafatesan'ny renin'izy ireo, satria olona iza no hahatsapa fanamaivanana amin'ny fahafatesan'ny reniny?
Olona vitsy dia vitsy ny valiny satria matetika tsy tsotra ny alahelo. Tsy hafahafa ho an'ny olona iray ny mahatsapa fanamaivanana fa tsy mijaly intsony ny reniny.
Noho izany, aza mieritreritra hoe fantatrao tsara ny zavatra tsapan'ny olona iray. Anontanio izy ireo, ary na inona na inona valinteniny, aza mitsara azy ireo amin'izany.
Fitsipika 9 tokony harahina rehefa malahelo ny olona iray tianao
Fomba marina 5 hanampiana ny hafa amin'ny fotoan'androny
Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fanomezana fampiononana olona hafa dia ny fahaizanao mihaino mavitrika izay lazain'izy ireo.
Na inona na inona fehezanteny ampiasainao, na ireo efa noresahinay teto na ny fomba fiasao, dia tsy dia manandanja loatra noho ny fahaizanao mihaino izy ireo.
Ny fihainoana mavitrika dia fahaiza-manao anehoanao fa ilay olona henonao dia manan-kery, manan-danja ary mendrika henoina.
Ireo dia fanamafisana izay indraindray mila atao rehefa tsy ao anaty toerana ara-tsaina tsara ny olona iray.
Ny fomba tsara indrindra mihainoana mavitrika dia ny esory ny fanelingelenana hafa izany dia mety hahatonga ilay olona hieritreritra fa tsy miraharaha ianao.
Vonoy ny televiziona, miato kely amin'ny sarimihetsika, aza raharahianao ny telefaonanao finday rehefa miresaka amin'ilay olona ianao.
Afaka miverina amin'ireo zavatra ireo foana ianao any aoriana. Manatreha miaraka amin'izy ireo amin'ny fotoam-pitsapana.
Azonao atao koa ny mampiseho ny fihainoana mavitrika amin'ny fanamafisana izay nolazain'ny olona iray hafa tamin'ny teninao manokana.
Ity koa dia manampy amin'ny mazava raha toa ka sahirana amin'ny fampitana ny zavatra manelingelina azy ilay olona.
Ny ady mangina dia mahazatra raha mitomany na misaina ilay olona.
Tsy maninona ny mijery ny manodidina anao amin'ny fotoana mangina. Manome fotoana iray manokana ilay olon-kafa fa tsy mifampijery.
Fantaro fa tsy mila manana valiny ianao.
Rehefa manandrana mampionona olona iray ianao dia mety hahatsapa faneriterena anaty hanandrana hamaha ny alahelony.
Rehefa dinihina tokoa, tsy tianao ny hahita olona mijaly mihoatra ny tsy maintsy.
Na izany aza, maro amin'ireo fanaintainan'ny fiainana no lehibe loatra ka tsy voavaha tsara ao anaty resaka tokana. Ny olana sasany dia tsy manana valiny mora fotsiny.
miverina ve ny lehilahy rehefa lasa any amina vehivavy hafa
Indraindray ny olona iray dia mety mila manatona fitsaboana na mila fotoana bebe kokoa fotsiny mba tena handaminana izay manelingelina azy.
Tsy tokony hanakana anao tsy hanandrana hampionona olona iray miseho fahantrana izany. Fantaro fotsiny fa mety hametraka fanontaniana retorika fantany izy ireo fa tsy misy valiny rehefa miresaka aminao.
Milaza fotsiny ny fahasosorany sy ny fanaintainany izy ireo mba hifandray aminao sy handamina azy io tsara kokoa. Avelao izy ireo ary aza milefitra amin'ny tsindry hamaly.
Azonao atao ny milaza zavatra toy ny, 'Tsy manana valiny tsara aho amin'izany, fa reko izay lazainao.'
Aza manandrana mampihena ny toe-javatra ratsy na manery azy hanana lafy tsara.
Paikady iraisana izay ezahan'ny olona ampiharina dia ny manandrana mahita ny firakofana volafotsy ao amin'ireo rahona volondavenona misy tarehin-javatra ratsy.
Tsy dia tsara izany hevitra izany.
Ny olana dia tsy ny tarehin-javatra rehetra no misy filaharana volafotsy. Mety haniratsira na manambany ny fihenan'ny fanaintainany amin'izany fomba izany.
Avy amin'ny ohatra teo aloha, ny renin'ny namany maty noho ny aretina mitaiza dia ratsy fotsiny manodidina. Avelao izy ho ratsy.
Mety halaim-panahy ny hiteny toa ny, 'Farafaharatsiny tsy mijaly izy izao.' na 'Azoko antoka fa any amin'ny toerana tsara kokoa izy.'
Saingy tsy hafatra fampiononana ireo. Izy ireo dia hafatra izay mampihena sy manandrana manova enta-mavesatra ara-pihetseham-po amin'ny fomba izay tsy hanampy an'io namana io.
Tsara lavitra ny milaza zavatra toy ny, 'Miala tsiny amin'ny reninao aho. Fantatro fa tsy misy teny afaka mampiadana anao. Fantaro fotsiny fa eto aminareo araka izay azoko atao aho. ”
Ary avelao ilay olona hahatsapa izay zavatra tokony ho tsapany fa tsy manandrana manolotra vahaolana ambonin'ilay fanaintainana.
Aza gaga amin'ireo fihetsika mampihetsi-po tsy ampoizina.
Rehefa manandrana mampionona olona iray hafa ianao dia fantaro fa mety tsy ho araka ny antenainao azy ny fihetsem-pony.
Na dia milaza ny zavatra tsara sy mety rehetra aza ianao hiezahanao hampionona olona iray hafa, mety hamaly amin'ny fahatezerana na amin'ny tsy fahampiana izy ireo.
Mety ho hitan'izy ireo fa tsy dia misy dikany ireo karazana fanambarana ireo, na mety hiteraka zava-maharary ho azy ireo ianao izay miteraka fihetsika tsy ampoizina.
Aza raisina manokana ireo zavatra ireo. Aza avela ho sosotra na ho tezitra amin'ilay olona ianao. Milamina fotsiny ary avelao hitohy amin'ny toe-javatra tokony hitohizany ny toe-javatra.
Ny faharetana dia hitondra anao amin'ny toe-javatra ary hanome ilay olona ny efitrano ilain'izy ireo handaminana ny fihetsem-pony.
Aza adino: ny fanatrehanao dia zava-dehibe kokoa noho ny fitambaran'ny teny miavaka.
Midira miaraka amin'ilay olona amin'ny ho avy raha afaka. Ampahafantaro azy ireo fa karakaraina izy ireo ary misy olona vonona ny ho eo ho azy ireo amin'ny fotoan-tsarotra.
raha sendra andro ratsy ianao
ahoana no hijoroana amin'ny olona
ahoana no ahazoana bandy manina anao toa adala
ahoana no hahafantarana raha misy mpiara-miasa manintona anao
inona no hatao rehefa mankaleo ny zava-drehetra